Ụgbọ Mmiri n’Oge Ochie; Otú E Si Eme Ka Azụ̀ Ghara Imebi | Ị̀ Maara?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mizo Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zulu
Gịnị ka ndị na-arụ ụgbọ mmiri n’oge ochie na-eme ka mmiri ghara ịba n’ụgbọ ha?
E nwere otu nwoke aha ya bụ Lionel Casson. Ọ bụ ọkachamara n’ihe gbasara ụgbọ mmiri ndị a rụrụ n’oge ochie. O kwuru na ọ na-abụ ndị na-arụ ụgbọ mmiri na Rom rụchaa ụgbọ mmiri, ha na-eji ihe techie ebe a kụkọtara osisi abụọ ọnụ. Ha na-ejikarị “bitumen, [ya bụ, korota] ma ọ bụ bitumen na mgbá ete n’ebe dị iche iche a kụkọtara osisi abụọ ọnụ ma ọ bụkwanụ ha etee ya n’okpuru ụgbọ nakwa n’akụkụ ya abụọ. Ha na-etekwa korota n’ime ya.” Tupu oge ndị Rom, ndị Akad oge ochie na ndị Babịlọn na-eji bitumen ete ụgbọ ha ka mmiri ghara ịba na ya.
Ụdị bitumen a dị mmiri mmiri juru eju n’ebe dị iche iche a kpọrọ aha na Baịbụl
Akwụkwọ Nsọ Hibru kwuru banyere ụdị ihe a e ji etechi ụgbọ mmiri. O kwuru ya na Jenesis 6:14. Ọ ga-abụ na okwu Hibru a sụgharịrị “korota” pụtara bitumen. Bitumen na-esi n’ime ala apụta.
E nwere ụdị bitumen abụọ na-esi n’ala apụta. Otu na-adị mmiri mmiri, nke ọzọ na-akpụkọ akpụkọ. Ndị na-arụ ụgbọ mmiri n’oge ochie na-eji nke ahụ na-adị mmiri mmiri etechi ụgbọ ha. Ozugbo e tere ya n’ụgbọ, ọ na-akpọ ma sie ike, mee ka mmiri ghara ịba n’ụgbọ.
Bitumen juru eju n’ebe dị iche iche a kpọrọ aha na Baịbụl. Ndagwurugwu Sidim, nke dị nso n’osimiri a na-akpọ Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, “jupụtara n’olulu bitumen.”—Jenesis 14:10.
Olee ihe ndị mmadụ na-eme azụ̀ ha n’oge ochie ka ọ ghara imebi?
Ndị mmadụ ejighị azụ̀ egwu egwu, o teekwala ha tawara ya. Ụfọdụ n’ime ndịozi Jizọs na-akụ azụ̀ n’Osimiri Galili tupu ha amalite iso Jizọs. (Matiu 4:18-22) Ma ó nweghị ihe ọzọ, a na-eburu ụfọdụ azụ̀ e gbutere n’osimiri ahụ gaa n’ebe a na-amịkpọ azụ̀ ka ọ ghara imebi. Ebe ndị a na-anọ amịkpọ azụ̀ dị nso n’osimiri ahụ.
Ndị na-akụ azụ̀ n’oge ochie n’Ijipt. A pịrị ha n’osisi
Otú e si amịkpọ azụ̀ n’ebe ụfọdụ taa nwere ike ịbụ otú e si amịkpọ ya na Galili n’oge ochie. Ọ na-abụ e gbutechaa azụ̀, ihe mbụ a na-eme bụ ịbọwa ya afọ ma wepụsịa ihe ndị dị n’ime ya, jirikwa mmiri saa ya. Otu akwụkwọ sịrị na “a na-emepe isi azụ̀ tee ya nnu, teekwa ya nnu n’ọnụ nakwa n’ahụ́. E techaa azụ̀ ndị ahụ nnu, a na-edosa ha n’ahịrị n’ahịrị ma jiri ute e tere nnu sachie ha. A na-edosakwa azụ̀ ndị ọzọ n’elu ya ma werekwa ute e tere nnu sachie ha. A na-ahapụzi azụ̀ ndị ahụ ka ha nọọ abalị atọ ma ọ bụ abalị anọ ma ọ bụkwanụ abalị ise. Abalị ole ahụ gachaa, a na-atụgharị azụ̀ ndị ahụ ma hapụ ha ka ha nọọkwa abalị ole ha nọburu. N’oge ahụ a hapụrụ ha, mmiri niile dị ha n’ahụ́ na-ata, nnu na-abanyekwa ha n’ahụ́. Ọ na-abụ azụ̀ ndị ahụ kpọọ, ha esie ezigbo ike.”
A maghị mgbe azụ̀ e si otú a mịkpọọ na-anọru tupu ya emebie. Ma, ebe ọ bụ na ndị Ijipt oge ochie na-eburu azụ̀ ndị e si otú a mịkpọọ gaa ree na Siria, ọ pụtara na azụ̀ ndị e si otú a mịkpọọ anaghị emebi ngwa ngwa.
Ị̀ Maara?—Julaị 2014
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Julaị 2014 | Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?